Philosophy | Zizawa's refuge
http://fora.tv/2006/04/20/Among_the_Dead_Cities#fullprogram အင်္ဂလန်က နံမယ်ကြီး ဖီလော်ဆော်ဖာ A C Grayling နဲ့ နံမယ်ကြီး ဝေဖန်ရေး ဆရာ Chris Hitchens တို့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ ရန်သူ့ဘက်က အရပ်သားတွေနဲ့ သူတို့နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အဆောက်အဦတွေကို ပစ်မှတ်ထား ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်တာကို ကျင့်ဝတ် ရှုဒေါင့်ကနေ အငြင်းအခုံ လုပ်ကြတယ်။ A C Grayling ကို လူထု ဦးစိန်ဝင်းက ဗမာ စာဖတ် ပရိသတ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖူးတယ်။ နှစ်ယောက် စလုံးရဲ့ သက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှုက အငြင်းအခုံ အတတ်ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မှ ဖြစ်နိုင်မဲ့ သက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှုမျိုး။ Grayling က ဖီလော်ဆော်ဖာ၊ နောက်တယောက်ကတော့ နိုင်ငံရေး … Continue reading →
ဟိုင်ဇင်ဘတ်ရဲ့ uncertainty principle ဟာ ဖီလော်ဆော်ဖီမှာ အထူးသဖြင့် philosophy of science မှာ ရိုက်ခတ်မှု တော်တော် ကြီးကြီးမားမား ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒိရိုက်ခတ်မှု အနက်အရှိုင်းကို ပိုပြီး နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ uncertainty principle အဓိကကျောရိုးအဖြစ် ပါဝင်နေတဲ့ ကွန်တမ်သီအိုရီကို နည်းနည်းပြန်ကြည့်ရင် သင့်တော်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ uncertainty principle ဟာ QM မှာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးသလဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့ ကမ္ဘာကျော် ရူပဗေဒ နိုဘယ်ဆုရှင် QED (Quantum Electro-Dynamics) အိပ်စပတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Richard Feynman ရဲ့ မှတ်ချက်ကို ပြောပြချင်တယ်။ သူက ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ The uncertainty principle “protects” quantum mechanics. Heisenberg … Continue reading →
ငါရွိတာကို သိရတဲ့ အသိဟာ မွန္ကန္တဲ့ အေျခခံ တခုခုေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားလုိ႔သာ ဒီအသိကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ႏုိင္တာျဖစ္ၿပီး ဒီလုိမွန္ကန္တဲ့ အေျခခံေပၚ တည္ေဆာက္ ထားႏုိင္တာကိုက ငါဟာ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္တေယာက္ရဲ့ဖန္ဆင္းခံဆိုတာ မျငင္းႏုိင္ဘူးလို႔ Descartes ကဆိုတယ္။ ငါဟာ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္တေယာက္ရဲ့ဖန္ဆင္းခံသာ မဟုတ္ရင္ ငါရွိတာကို ရွင္းရွင္းနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ျမင္ႏုိင္စရာ မရွိဘူးလုိ႔ Descartes ကေျပာတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီအခ်က္ (ငါဟာ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ တေယာက္ရဲ့ဖန္ဆင္းခံ ဆိုတဲ့အခ်က္) ဟာ ဘယ္လိုမွ မမွားႏုိင္တဲ့ အမွန္တရား necessary truth ျဖစ္တယ္လို႔ Descartes ကဆုိတယ္။ ဘာအတြက္ necessary … Continue reading →
Descartes နဲ႔ Leibniz အတြက္ God ဟာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း နံရံေတြမွာ ေရးထားတဲ့ ပန္းခ်ီရုပ္ပုံေတြထဲက လူနဲ႔တူတဲ့၊ အေကာင္အထည္ရွိတဲ့ အရာမဟုတ္ဖူးလုိ႔ အရင္အခန္းမွာ ေျပာခဲ့တယ္။ By the word ‘God’, I understandasubstance that is infinite, (eternal, immutable) independent, supremely intelligent, supremely powerful, and which created both myself and everything else (if anything else there be) that exists. (Third Meditation, 45) (Spinoza က God ကို … Continue reading →